Loans » GBank
(+95) 1 368-364-0
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစုစပ် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ချေးငွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ချေးငွေအား တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ထုတ်ချေးသည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေသက်တမ်း အနည်းဆုံး (၁)နှစ်မှ (၃)နှစ်အထိ ချေးယူနိုင်ပါသည်။ အတိုးနှုန်း (၁)နှစ်လျှင် (၁၀%)ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ရာတွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရင်းနှီးငွေ အတွက် ချေးငွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ နှစ်ချင်းဆပ် ချေးငွေဖြစ်ပါသဖြင့် ချေးငွေ သက်တမ်းကို (၁) နှစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ စာရင်းပို ချေးငွေ လျှောက်ထားလိုပါက စာရင်းပို ထုတ်ချေးခွင့်ရှိသော စာရင်းရှင် စာရင်းတခု ဖွင့်လှစ်ရပါမည်။ နေ့စဉ် ချေးငွေသုံးစွဲသည့်အပေါ်တွင် အတိုးနှုန်း (၉%) ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲခြင်းမရှိသော ချေးငွေအား တာဝန်ခံကြေး (၁%) သာကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၊ တင်ဒါ လုပ်ငန်းများ အတွက် သက်ဆိုင် ဌာနများမှ ဘဏ်တွင် အာမခံပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုသည့် အခါ ဘဏ်အာမခံ ချေးငွေကို ရယူလျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်အာမခံ ချေးငွေ လျှောက်ထားခြင်း အတွက် ဘဏ်သို့ အာမခံ အဖြစ် ငွေသား (သို့) မြေနှင့် အဆောက်အဦ ပေးအပ်ရပါမည်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် (၂%)ကောက်ခံပါမည်။
Nya/43, Yuzana Street, Bayint Naung Warehouses, Mayangone Township, Yangon.
(+95) 1 3683640 , (+95)9967890033~55
(+95) 1 3683494
Choose Account Type Fixed Deposit Savings Deposit High Speed Savings Deposit Premium Savings Deposit
Period - Months to Grow - 1 month3months6months9months 12 months 24 months - Months to Grow - 1 month2months3months4months5months6months7months 8 months9months 10 months 11 months 12 months - Months to Grow - 1 month2months3months4months5months6months7months 8 months9months 10 months 11 months 12 months 1 12 12
Yearly Rate is %
© Copyright 2019 - Glory Farmer Development Bank. All Rights Reserved.